Forex သတင်းများ Crypto သတင်းများယနေ့ | Forex Signals Live
LUNC နှင့် USTC သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ တဖန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်သည်- Santiment
အွန်လိုင်းကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလပ်ဖောင်း Santiment မှမကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် TerraClassic (LUNC) နှင့် TerraClassicUSD (USTC) သည် အများသူငှာစိတ်ဝင်စားမှုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ Terra မပြိုကွဲမီ လအတော်ကြာတွင် အဆိုပါ cryptocurrencies များကို crypto အသိုက်အဝန်းမှ လျစ်လျူရှုထားဆဲဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားသည်။ Santiment က LUNC နှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ စုဝေးမှု 110% နှင့် 320%
EURCHF အရောင်းအားသည် 1.00450 သော့ချက်အဆင့်နှင့်နီးကပ်စွာပါရှိသည်။
EURCHF ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ဇွန်လ 28 ရက်နေ့တွင် EURCHF စျေးကွက်သည် 1.00450 သော့ချက်အဆင့်အနီးတွင် ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့် အရောင်းအားကောင်းမှုကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ရောင်းချခြင်းအား 1.00450 သော့အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းမှ တားဆီးထားသောကြောင့် စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသည် ကျဆင်းသွားသော ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ဝယ်သူများသည် ကျဆင်းနေသော ဆုတ်ယုတ်မှုကို သတိပြုမိကြပြီး ယခုအချိန်တွင် ၀ယ်လိုအားကို သတိပြုမိကြသည်။
AUDUSD Price: Will There BeaBearish Breakdown at $0.698
AUDUSD Price Analysis – June 29 The closing of daily candle below $0.683 level by the bears may push the price to test the support levels of $0.674 and $0.600. Ability to break up the resistance level of $0.698 level may lead to price inclination towards the resistance level of $0.710, and $0.717 AUD/USD Market […]
XLM/USD (Stellar) စျေးနှုန်းသည် ရောင်းသူများ၏ ဖိအားများ တိုးလာသောကြောင့် ယခင်အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျဆင်းနေပါသည်။
STELLAR စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း – ဇွန်လ 29 ရက်နေ့တွင် ဝက်ဝံများသည် ၎င်းတို့၏အရှိန်အဟုန်ကို တိုးမြင့်လာပါက၊ ၎င်းသည် ပံ့ပိုးမှုအဆင့် $0.09 ကို ချိုးဖျက်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် $0.07 သို့ ထပ်ဆင့်စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားစေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် $0.05 အဆင့်အထိ တိုးလာနိုင်သည်။ ဝက်ဝံတွေရဲ့ ဖိအားက $0.09 ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ကို မဖြိုဖျက်နိုင်ရင် […]
Litecoin သည် $60 မြင့်မားသော်လည်း $41 အနိမ့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသောကြောင့်ကျဆင်းသွားသည်။
အဓိက ပေါ်လွင်ချက်များLTC စျေးနှုန်းသည် ရွေ့လျားပျမ်းမျှနှုန်းများကြားတွင် အတက်အကျရှိပြီး ၎င်း altcoin သည် နောက်ထပ်ကျဆင်းနိုင်သည့် Litecoin (LTC) လက်ရှိစာရင်းအင်းများ လက်ရှိစျေးနှုန်း: $52.38Market Capitalization: $4,385,985,758Trading Volume: $533,179,290 $100 အဓိကထောက်ပံ့ရေးဇုန်များ $120, $140, $60 ($40 Lite) LTC) စျေးနှုန်း ဆန်းစစ်ခြင်း ဇွန် 20 ရက်၊ 28Litecoin ၏ (LTC) စျေးနှုန်းသည် $2022 အနိမ့်ဆုံးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသောကြောင့် စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားပါသည်။ LTC စျေးနှုန်းသည် […]
Bitcoin Mining Rigs-Backed Loans ရေအောက်- Ethan Vera
မိုင်းတွင်းလုပ်သားများ ပျက်ကျမှုမှ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုကို ခံစားရသဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်အတွင်း Bitcoin (BTC) သည် နောက်ထပ် 21% ကျဆင်းသွားသည်။ ယခုအခါ Bloomberg မှ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် သတ္တုတွင်းတူးစင်များမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ချေးငွေများစွာသည် ဒုက္ခရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ Luxor technologies ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Ethan Vera မှ CFO နှင့် CFO တို့သည် ဒေါ်လာ4ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ သတ္တုတူးဖော်မှု […]
Lucky Block Price Forecast- June 27 Lucky Block price forecast is bullish. The market is currently reacting to the bullish trend line above the demand level at $0.0009700. LBLOCK/USD Long-Term Trend: Bullish (30-Minute Chart) Key Levels:Zones of supply: $0.0011000, $0.0011800. Zones of Demand: $0.0009700, $0.0008000Lucky Block has gyrated between the resistance zone at $0.001180 and […]
ကုန်သွယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများရွေးချယ်ခြင်း
အားလုံးသည်ရိုးရှင်းလှသည်။ သို့သော်အဆိုးဆုံးပွဲစားကိုမတွေ့မချင်းကုန်သွယ်မှု Forex သည်ပန်းခြံတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်နားလည်လာသောအခါ၌ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်စျေးကွက်တွင်မည်မျှအောင်မြင်နိုင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာပွဲစားများစွာရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးက“ အကောင်းဆုံး” ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် အားလုံးသူတို့ကတိထားတော်ကယ်မနှုတ် ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမ်းလှမ်းရန်ဆိုကြသည်ရိုးရှင်းစွာ။ ထို့ကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်ပွဲစားသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ရန်သင်တစ်မိုင်ပိုသွားရန်လိုအပ်သည်။
လူတိုင်းမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်လှည့်စားသောဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ခြားနားမှုမရှိပါ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စတော့ရှယ်ယာနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပြုချက်များကိုရှာရန်ထွက်သွားပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းရပ်ပွဲစားများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မှန်ကန်သောအစုရှယ်ယာများကိုမည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။